Laba arimood oo ku kalifay Madaxweyne Farmaajo inuu “ka aamuso” qaraxii ay ku dhinteen dhalinyaradu ee Gelato Divino | XORRIYA NEWS
Home Fikrado Laba arimood oo ku kalifay Madaxweyne Farmaajo inuu “ka aamuso” qaraxii ay...
Laba arimood oo ku kalifay Madaxweyne Farmaajo inuu “ka aamuso” qaraxii ay ku dhinteen dhalinyaradu ee Gelato Divino
Waxa sidoo kale ballan-qaadyadiisa ka mid ah in wax ka qaban doono ammaanka oo aysan dhicin doonin tacsi iyo cambaareyn dambe, oo aan wadan ficillo jawaab ah.
1– In uu si la mid ah madaxdii ka horreysay ku fashilmay ammaanka, islamarkaana uu wali ku jiro damac kale oo ah hoggaanka Soomaaliya, sidaas darteedna uusan heynin wax uu u sheego shacabka Soomaaliyeed. Mar kasta oo uu amniga ka hadlo ama qarax cambaareynaya ay soo baxeyso mid ka mid ah guul-darrooyinkiisa.
2– In markii uu waday olalihiisa doorashada uu marar badan sheegay in aysan dhici doonin in dowladiisa cambaareyso oo kaliya weerada Al-Shabaab balse ay si dhab ah wax uga qaban doonto, taasna kuma uusan guuleysan Madaxweyne Farmaajo.
🖋 Ibraahim Axmed Cabdulle